Ku tabaruc dhoola cadeyn caafimaad leh
Qosol! Hadiyaddaada waxay si Wanaagsan u shaqeysaa!
Waxaad sidoo kale u diri kartaa deeqdaada: OHP - 1245 Main St, Green Bay, WI 54302
Waad ina taageeraysaa si aan wax u qabno sida ugu wanaagsan oo aan wax u qaban karno. Sii daryeel ilko iyo waxbarasho carruurta!
Waa kuwan waxyaabaha aad suuragal ka dhigatid!
Wuxuu bixiyaa daryeelka isbitaalka ee carruurta suuxdinta daran
Waxaad siisaa dugsi hoose oo dhan - 500 caruur ah - guntin burush caday, oo ay ku jiraan burush, caday, floss, iyo saacad
Caawinta in aan maalgalino barnaamijkeena ku-saleysan dugsiga ee gaaro degmooyinka iyo miyiga degmooyinka Degmada County
Sii baaris, nadiifin, raajo iyo sealam canug aan caymis lahayn
Dabool kharashka loogu talagalay baaritaanka degdegga ah si loo daaweeyo xanuunka degdega ah iyo dhaawaca shilka ah
Ubixi cadayga carruurta si aysan mar dambe ula wadaagin walaalaha ama qof weyn